NKE ỌMỤMỤ JESU KRISTI (II) | Ulogu.org
NKE ỌMỤMỤ JESU KRISTI (II)
(Kristi Na-Eweghachị Ịdị-N’otu Nke Ihe Niile E Kere Eke)
Mgbe Jesu hụrụ igwe mmadụ ahụ, o nwere ọmiko n’ahụ ha, n’ihi na ha bụ ndị a na-esogbu, ndị na-enweghị onye inyeaka, ndị dị ka atụrụ na-enweghị onye na-azụ ha. O wee gwa Ụmụazu Ya: “Ihe mịrị n’ubi hiri nne, ma ndị ọrụ dị sọ olemole. N’ihi ya, rịonụ Onyenwe ihe mịrị n’ubi, ka O ziga ndị ọrụ n’ubi Ya.”
Ọ kpọrọ Ụmụazu Ya iri na abụọ, wee nye ha ike kariri nke ajọ mmụọ, na ike ịchụpụ ajọ mmụọ na igwọ ụdị ọrịa nile, na nrianria dị iche iche. Lee aha Ụmụazu iri na abụọ ahụ; onye mbụ bụ, Saịmon, onye a na-akpo Pita, na nwanne ya Andru; Jemis, nwa Zebedi, na nwanne ya Jọn; Filip na Batalomi; Tọmọs na Matiu, onye ọna-ụtụ; Jemis nwa Alfiọs, na Tadịos; Saịmon nke Zilọt, na Judas Iskarịọt, onye raara Jesu nye n’aka ndị gburu ya.
Jesu zipụrụ Ụmụazụ iri na abụọ ndị a, bịakwa dụọ ha ọdụ, sị: “Unu azọbakwala ụkwụ n’ala ndị ọgọmmụọ, Unu abanyekwaka n’obodo ndị Sameria. Kama jekwurunụ atụrụ furu efu n’Ụlọ Izrel. Mgbe unu na-aga, na-ekwuputanụ na alaeze eluigwe abịala nso. Gwọọnụ ndị ọrịa; kpọteenụ ndị nwụrụ anwụ; meenụ ka ahụ ndị ekpenta dị ọcha; chụpụnụ ajọ mmụọ. Unu natara ihe n’akwughị ụgwọ, nyenụ ya ndị mmadụ n’anaghị ha ego.
Ozioma Nke Osebruwa.